Zanu PF Dismisses as 'Nonsensical' Renewal of U.S Imposed Targeted Sanctions
The United States imposed targeted sanctions on President Robert Mugabe and his inner circle in 2003.
Zanu PF has dismissed as nonsensical the move by the United States Wednesday to maintain its targeted sanctions imposed on President Robert Mugabe and his inner circle.
Reacting to the renewal of the sanctions, the party’s deputy director of information and publicity, Pyschology Maziwisa, said the sanctions are a threat to most Zimbabweans.
“If anybody poses any threat to anybody is the government of America. They have imposed sanctions that have caused enormous complete damage to our economy and that is a serious threat to the livelihoods of the ordinary Zimbabweans,” said Maziwisa.
Interview With Psychology Maziwisa on United States Sanctions Renewal
However, in defense of the continuation of the sanctions, Shakespear Hamauswa, lecturer of international relations at Mulungushi University in Zambia, said by maintaining the sanctions, the U.S is showing consistency.
Interview on U.S Sactions With Shakespear Hamauswa
Any expectations that the United States would follow in the footsteps of the European Union (EU) and review or adjust its sanctions on Zimbabwe, were dashed Wednesday.
In keeping with Executive Order 13288 of 2003, where then U.S. president George Bush declared a national emergency on Zimbabwe, for undermining democratic practices or institutions, President Barack Obama, again issued a notice for continuation of the measures.
In the notice, President Obama cited the “unusual and extraordinary threat to foreign policy of the united states,” by named members of the government of Zimbabwe, who include President Robert Mugabe.
Mr. Obama said, “The threat constituted by the actions and policies of certain members of the government of Zimbabwe and other persons to undermine Zimbabwe’s democratic process or institutions has not been resolved.
However, America’s continuation of sanctions have come under scrutiny, given the easing of targeted sanctions by the EU, and normalization of relations with the Zimbabwe government by such countries as Britain.
EU Resumes Direct Aid to Zimbabwe With $270 Million Package
EU-Zimbabwe Relations Thawing as U.S Maintains Targeted Sanctions
The European Union Renews Zimbabwe Sanctions